व्यवसायीले गरे सार्वजनिक सवारीमा गीत बजाउन निषेध ! यधि गीत बजाय हुने भो यस्तो कारबाही – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक सवारीका साधानमा गीत संगीत नबजाउन आहृवान गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले संगीत रोयल्टी तथा मनोरञ्जन कर लिने गरी निर्देशिका जारी गरेपछि महासंघले यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुलाई गीत संगीत नबनाउन आहृवान गरेको हो ।
महासंघले सरकारले संशोधन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्न चैत २६ गते परिषद बैठक पनि बोलाएको छ ।
बैठकले सरकारले यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नभएका सवारीको रुट नवीकरण र दर्ता नगर्ने गरी निर्णयको समीक्षा गर्नेछ ।
सवारीमा गीत बजाउन किन नपाउने ? बजे के कबाही होला ?
अब सार्वजनिक सवारीले नेपाली गीत-संगीत बजाएवापत पनि संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गर्दै गीत-संगीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले तोकिएको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिलिपी अधिकार ऐनले कुनै सिर्जनालाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिए त्यसवापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधानमा टेकेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यो व्यवस्था तत्काल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी सवारीसाधनका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
रुट इजाजत तथा बिल-बुक नविकरणका लागि जाँदा संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अब सार्वजनिक यातायातका धनीले गीत बजाएवापत संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो व्यस्थाअनुसार अब ठूला बसले दुर्इ हजार, मिनी बसले १४ सय ट्रक तथा ट्रिपरहरुले १२ सय, माइक्रो बस लगायात एक हजार रोयल्टी तिनुपर्नेछ । त्यसैगरी ट्याक्सी लगायतका कालो नम्बर प्लेटका सवारीले पनि संगीत रोयल्टी तिर्न अनिवार्य गरिएको छ ।
यो रोयल्टी उठाउन भोलिबाटै विभागका देशभरका ३४ वटै कार्यालयहरुमा नेपाल संगीत रोयल्टी संकलन समाजको काउन्टरहरु खुल्नेछन् । सो समाजले तोकिएको शुल्क उठाएपछि सार्वजनिक सवारीलाई रोयल्टी चुक्तको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
त्यसपछि मात्रै विभागले सार्वजनिक सवारीको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समाजले वर्षमा करिब २० करोड संगीत रोयल्टी उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सो रकम स्रष्टा, गायक गायिका र संगीतकारहरुलाई वैज्ञानिक बिधि बनाएर वितरण गर्ने समाजका महासचिव महेश खड्काले बताए ।
‘विदशेमा सयवर्ष अघिदेखि स्रष्टाहरुले यस्तो रोयल्टीबाट लाभ लिइरहेका थिए,’ खड्काले भने,’हामीले भर्खरै पाइला चालेका छौं ।’
यदि सार्वजनिक सवारीसाधनले आफूले गीत नबजाउने भनेमा रोयल्टी नर्तिन पनि सक्छ । तर, छड्के अनुगमन गर्दा गीत/संगीत बजाएको पाइए प्रतिलिपी अधिकार ऐन बमोजिम कारवाही गरिने खड्काले बताए ।
Posted in बिजनेस, मनोरंजन
Prevवरिष्ठ हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी पत्नीको निधन…
Nextआज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ?अमेरिकी डलरको, साउदी, कतार दुबई , मलेसिया लगायतका मुलुकको आजको मुद्राको दरभाउ यस्तो छ..
एक्लै दुई किलोमिटर सडक खनेका चन्द्रबिर वलीलाई खाद्यन्न सहयोग । पूरा खबर हेर्नूहोस
“टिकटोक”बाट भाइरल भएका ४ जुमल्याहा दीदी बहिनी एक साथ मिडियामा-हेर्नुहोस रमाइलो (भिडियो सहित)
चितवन रंगशालामा रबि लामिछाने देखि मह जोडीको आʼगमन, अनमोल केसीले गरे यति ठुलो सʼहयोग (भिडिʼयो हेर्नुस्)